Banaanbax looga soo horjeedo ciidamada Kenya oo ka dhacay Gedo | KEYDMEDIA ONLINE
Dibadbax looga horjeedo ciidamada Kenya ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dadweyne careysan ayaa maanta oo Jimca ah isugu soo baxay duleedka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, iyagoona halkaas ka dhigay banaanbax ay uga soo horjeedaan ciidamada Kenya ee ku sugan gobolka.
Dibad-baxayaashaan oo isugu jiray Haween, Carruur, dhalinyaro iyo Odayaal ayaa ku hor banaan baxay afaafka hore ee xerada ciidamada Kenya ee degmada Ceelwaaq, iyagoonaa ka careysnaa dil ay ciidamada u geysteen wiil dhalinyaro ah iyo saddex kale oo ay qafaasheen, kadibna dileen, maydkoodana god ku rideen.
"Uma dulqaadaneyno xasuuqa ay nagu hayaan ciidamada Kenya, dowlada Somalia waxaan ugu baaqeynaa iney wax ka qabato, hadii aysan awood u laheyna waxaan diyaar u nahay inaan qoryaha qaadano oo iska celino” ayey tiri haweeney ka tirsaneyd banaanbaxayaasha oo shucuurteedu aad u kacsaneyd."
Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo Muqdisho shir jaraa'id ku qabtay ayaa si adag uga hadlay xasuuqa loo geystay Shacabka ku dhaqan Ceelwaaq, iyagoona cadaalad ka dalbaday in ciidamada AMISOM jawaab ka bixiyaan falkaan.
Qoraalka ka soo baxay xafiiska ciidamada AMISOM ayaa isna lagu sheegay in baaritaan kadib la ogaaday in ciidamada AMISOM aysan qeyb ka aheyn ciidamada dhibaataas geystay oo ah Kenyaatiga ku sugan gobolka Gedo.
Ilaa iyo hadda dowladaha Soomaaliya iyo Kenya kama hadlin dhacdadaan xanuunka badan ee lagula kacay Shacabka Gedo.